Renaissance Curaçao manatsara ny toeram-pialantsasatra amin'ny endrika vaovao
Home » Resort News » Renaissance Curaçao manatsara ny toeram-pialantsasatra amin'ny endrika vaovao
Manamarika ny faha-10 taona niorenan'ny The Renaissance Curaçao Resort & Casino ny volana febroary izao. Mba hankalazana ny fahombiazan'ny fahombiazan'izy ireo ho toy ny foto-dehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina fizahan-tany Curaçao, ny trano fandraisam-bahiny dia handray fitsinjovana be dia be natao mba hanomezana endrika fanampiny fitoniana sy fitsaharana ho an'ny vahiny.
"Tianay ny taratry ny hatsaran-tarehy voajanaharin'i Curaçao amin'ny endrika milamina sy milamina," hoy ny Tale Jeneraly, Maylin Trenidad. “Hahatsikaritra ireo endrika volo sy maoderina kokoa ireo vahininay ary mijanona ho marina hatrany amin'ny fakantsika Curaçao ihany koa ary maneho ny marika Renaissance.”
Hanomboka ny 1 aprily ny fanavaozana ary ho vita amin'ny dingana maro. Ny trano fisakafoanana, ny faritra fidiovana ary ny trano filokana dia kasaina hovitaina amin'ny volana aogositra. Ho an'ny dingana faharoa, ny efitrano fandraisam-bahiny rehetra dia napetraka ho vita hatramin'ny desambra.
Ny vahiny dia afaka manantena ny volavolan-drafitra ho avy mba hampifangaro ireo singa ao anaty sy any ivelany, ary koa manangana ny hatsaran'ny nosy Renaissance Curaçao amin'ny ankapobeny. Ny hevi-dehibe dia ahitana:
• Lobby "Luxe Cocoon" vaovao - Ny efitrano fidiovana vaovao dia hanome tontolo akaiky sy lalina ho an'ny vahiny hankafizany amin'ny fahatongavany sy mandritra ny fotoana ijanonany. Hita taratra manerana ny solaitrabe, manomboka amin'ny fanaka ka hatramin'ny asa kanto niparitaka nanerana ilay faritra, ny firafitra manaitra sy ny tsy ampoizina miafina no hanaitaitra isaky ny zoro.
• Fidirana Casino nohavaozina - Ny trano filokana be mpitsidika indrindra any Curaçao dia handray ireo vahiny hiditra amin'ny kianja filalaon'ny olon-dehibe 1,500 metatra toradroa miaraka amin'ny fidirana mirary sy moderina.
• Efitrano fandraisam-bahiny nohatsaraina - Ny efitrano fandraisam-bahiny nohavaozina miaraka amin'ny singa an-tanàn-dehibe sy voajanahary dia ahitana fampidirana vaovao toy ny zavakanto vita amin'ny seramika ao an-toerana sy loko marevaka nefa malefaka. Ny palette sophisticated izay namboarina sy namboarina dia hamorona fotoana fialofana manokana na toeram-piasana miala sasatra.
• Restauré Nautilus nohavaozina - Hovaina ny endrika trano fisakafoanana ankapobeny hanehoana ny foto-kevitra chi maoderina.
Ny fanavaozana dia hampiharina tsikelikely mamela ny fanavaozana ho vita amin'ny fomba mahomby sy ara-potoana, ary mamela ny vahiny tsy ho tapaka araka izay tratra.
Efatra no maty vokatry ny fianjeran'ny angidimby tany Istanbul
Ny seranam-piaramanidina Bay Area No. 2 dia iray amin'ireo mitombo haingana indrindra any Etazonia